Ballanqaadyo dhaqameedyo cusub ayaa hodan ka dhigaya dhulka quruxda badan ee Sicily
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Ballanqaadyo dhaqameedyo cusub ayaa hodan ka dhigaya dhulka quruxda badan ee Sicily
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Beerta Arkeolojiyada Selinunte
Beerta Arkeolojiyada ee Selinunte ayaa dib loo furey kaliya hal bil kadib dabkii baabi'iyay xoqidii Mediterranean iyo geedaha Acropolis bishii Sebtember 26-keedii.
Waxqabadyo takhasus leh oo deg deg ah, dhirta qiimaha leh ee qayb muhiim ah ka ah muuqaalka taariikheed ee qadiimiga ah ayaa dib loo beeray isla markaana dib loo soo celiyey aagaggii waxyeeladu soo gaadhay.
Toddobaad ka dib furitaanka Matxafka Arkeolojiyada ee Francavilla di Sicilia oo lagu dhiirrigeliyey faallooyinka xiisaha leh ee soo booqdayaasha badan, mas'uuliyiintu waxay go'aansadeen inay kordhiyaan saacadaha martida, oo hadda ah 10 subaxnimo ilaa 6 galabnimo.
Matxaf cusub oo ku yaal Tusa ayaa la daah furay - Lapidarium-ka Alesa Arconidea, oo ah magaaladii qadiimiga ahayd ee Sicilian-Greek ee halkaas taagneyd. Matxafku wuxuu calaamadeeyaa heerarka taariikhiga ah ee magaalada qadiimiga ah, laga soo bilaabo xilligii la aasaasay qarnigii 5aad. BC ilaa burburkeedii dhacdooyinka xasaasiga ah ee qarnigii afraad. AD ka dibna duulaankii Carabta ee Sicily.
Jaamacadda Catania waxay sharciyeysay qalab xirxiran si loo kobciyo booqashada goobta dhaqameed ama aag dabiici ah oo ilaaliya, taas oo u oggolaanaysa maareeyaha inuu falanqeeyo dabeecadda isla markaana tarjumo dookha martida isagoo ku siinaya waxyaabo dheeraad ah xaqiiqda la kordhiyay.
Aagga dibedda ee Villa Romana del Casale ee Piazza Armerina si buuxda ayaa loo horumarin doonaa loona horumarin doonaa iyada oo ay ugu wacan tahay maalgelinta POC, (Golaha Cilmi-baarista Yurub). Gaar ahaan, nal cusub oo soolar ku shaqeeya oo solar-ka soo buuxsama ayaa lagu rakibi doonaa booqashada habeenki, goob gawaarida la dhigto oo lugeynaya oo aan lahayn godad iyo musqulo cusub, maxaa yeelay xagaagii la soo dhaafay waxaa jiray dadweyne aad u tiro badan oo dadweynaha ah xilliyada fiidkii iyo habeenkii.
Aagagga cagaaran, aagga ganacsiga iyo nidaamyada qashin-qubka biyaha ayaa sidoo kale dib loo horumarin doonaa. Sababtoo ah Covid-19, Daabacaaddii 12aad ee Bandhigga Bellini, oo ku beegnayd sannad-guuradii 219 ee dhalashada muyuusigga, ayaa dib loo qorsheyn doonaa isla marka ay nabdoon tahay in la qabto.